Fivarotana fivarotana fivarotana fivarotana an-tsena | Martech Zone
Zoma, Septambra 6, 2013 Alahady 26 aprily 2020 Douglas Karr
Fantatrao fa miasa amin'ny indostria henjana ianao rehefa lasa lany andro ny rafitrao noho ny indostrian'ny Internet miasa mihemotra. Ity no indostrian'ny Point of Sales. Raha niasa tamin'ny teknolojia fivarotana aho taona vitsy lasa, jiolahim-boto tokoa ireo orinasa POS. Te hiara-hiasa amin'izy ireo izahay ary hiaraka amin'izy ireo, saingy hitan'izy ireo ho fandrahonana izy ireo ary nanakana anay. Ny ankamaroany angamba dia satria nahatsiravina ny haitaon'izy ireo. Mbola niasa tao amin'ny 199x User Interfaces izy ireo, nanana olana ara-piarovana lehibe, ary ny orinasan'izy ireo dia nivarotra solosaina birao misy efijery intelo monja mihoatra ny vidiny.
Faly be aho nahita ity fivoarana tao Engadget ity, Ny sehatra fivarotan'ny varotra ao Shopify dia manambatra ny varotra an-tserasera sy amin'ny fivarotana.
Shopify POS dia rindrambaiko iPad izay ahafahanao mivarotra ny vokatra fivarotanao Shopify amina toerana ara-batana sy ara-barotra. Ny POS dia mahatonga ny fampifangaroana sy ny fampifandrindrana rehetra eo amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet tsy misy dikany satria ny vokatra, ny mpanjifa ary ny baiko rehetra dia amin'ny toerana iray - an-tserasera.
Ireo mpivarotra antsinjarany dia tsy mila manara-maso intsony ny fanatontosana maro, ny katalaogin'ny vokatra ary ny rafitra fandoavam-bola. Shopify dia mampifangaro ny lafiny rehetra amin'ny orinasanao fivarotana amin'ny sehatra iray mora ampiasaina izay miaraka amin'ny swiper carte ho an'ny fanekena ny carte de crédit VISA, MasterCard ary American Express. Miaraka amin'ny mpamaky karatra misy azy ireo dia azonao koa ny tahan'ny fandoavambola - 2.1% + 30 ¢ amin'ny carte de crédit rehetra. Tsy misy sarany miafina na sarany sarotra.
Azonao atao ny manatsara ny hevitrao fivarotana rafitra miaraka amin'ny fitaovana natao ho an'ny Shopify POS, ao anatin'izany ny mpamaky carte de crédit, drawer cash, iPad stand ary mpanonta tapakila. Maimaim-poana amin'ny Internet ny fandefasana entana.
Izaho manokana dia tiako ny mahita an'io. Tsy afaka miandry aho mandra-pahatongan'ny orinasa POS sasany tsy miasa amin'ny fitsaboana mafy ny mpanjifany sy ny mpiara-miasa aminy.
Tags: teboka fivarotanaposshopify
Fambara: Mifampiresaha amin'ny alàlan'ny SMS, Email, Twitter ary Facebook